Ithegi: shoemoney | Martech Zone
Isenokuba sisithuba esothusayo sinikwe inyani yokuba ibhlog yam yehle kancinci ekufundeni. Inyani yile ndiyazi ukuba ibangelwa yintoni, kodwa andinalo ixesha ngoku lokutyala ukuze ndiyeke. Akukho zinkxalabo, nangona kunjalo, ndiza kuyiguqula kungekudala! Ngale nto, bendicinga kakhulu malunga nokuba zeziphi iindlela ezinokuthathwa ziinkampani kunye nabantu ukuze baqwalasele oontanga babo, amathemba abo, kunye / okanye abathengi
Umgangatho oPhezulu woThutho ngeXabiso leShirt
NgoMgqibelo, ngoJuni 14, 2008 NgoLwesihlanu, Februwari 12, 2016 Douglas Karr
Ukuba awenzekanga kubhlog kaJeremy Shoemoney, ibhlog enkulu onokuyilandela. UJeremy unenkqubo enkulu ebizwa ngokuba yiFree Shirt ngoLwesihlanu. Kungathatha iinyanga ezimbalwa ukuba uJeremy anxibe ihempe yakho, yinkqubo eyaziwayo. Ndingathanda ukuthetha kancinci kwifuthe lokuthatha inxaxheba kwinkqubo efana nale. Kucacile ukuba ibhlog kaJeremy ayinanto yakwenza namaGqala oMkhosi woMkhosi; nangona kunjalo, ukufikelela
Kule mpelaveki ndothuswe yiblog ethile ephawulweyo ... uluvo lwendawo ekuyiwa kuyo ibiyilensi ye squidoo. Ukuba kukho umntu omnye kweli lizwekazi ongenakuma ugaxekile, mhlawumbi nguSeth Godin, umbhali weNtengiso yeMvume kunye nomsunguli weSquidoo. Qaphela ku-Spammers: I-Squidoo mhlawumbi asiyondawo ifanelekileyo yokubeka ivenkile. Ngapha koko, ndimane ndilahla iScidoo inqaku elimnandi lokuba ndijongile ilensi ekuthethwa ngayo kwaye ndaziva ngathi ikhona